Kana Iwe Uchida Rusingaperi Rudo, Tarisa Kune Mumwe Munhu Anonzwa Kunzwira tsitsi Sezvaunoita Iwe - Ukama
Chirevo chekare chinoti zvinopesana zvinokwezva, asi ini kashoma kuti ndizvione ichokwadi.
Chokwadi, dzimwe nguva vanhu vanotaridzika zvakasiyana zvachose kune mumwe nemumwe vanozokwezva kune mumwe nemumwe, uye dzimwe nguva kuravira kwemumwe munhu mumimhanzi kana zvido zvavo zvichave polar-yakatarisana neyeumwe wavo.
Pakadzika pasi, zvakadaro, panofanirwa kuve nemuchato wepfungwa kuitira kuti vanhu vaviri vanyatsoremekedzana nekunzwisisana uye vagadzire timu yakanaka inogona kumira muyedzo wenguva.
Isu vanhu tiri vanhu vakaoma kunzwisisa. Isu tinoshanda pamatanho mazhinji akasiyana, asi isu tese tine mashoma, akakosha maitiro anotsanangudza chaizvo maitiro atinoita mune mamwe mamiriro uye maitiro atinotungamira hupenyu hwedu.
Chimwe cheizvi kugona kwedu kunzwa kunzwira tsitsi kune avo vakatikomberedza.
Kunzwira tsitsi kunotsanangurwa sekukwanisa kugovana manzwiro emumwe munhu kana zviitiko nekufungidzira kuti zvingave zvakaita sei mumamiriro ezvinhu emunhu iyeye.
mari mubhegi bhegi
Mumwe munhu anonzwira tsitsi zvakanaka pakuzviisa mune imwe shangu uye nekuona zvinhu nemaonero avo.
Tinogona kunzwa kunzwira tsitsi kwete kwete kuvanhu chete, asiwo kune vamwe vedu mhuka, uye kunyangwe nyika yakanaka yatinogara pairi.
Anenge munhu wese ane kunzwira tsitsi mavari. Kunge chero hunhu, mumwe nemumwe wedu anogara padanho rekutsvedza ne empaths kune rimwe divi uye psychopaths (uyo asinganzwi tsitsi chero) kune imwe.
Nei Kunzwira tsitsi kuchikosha Muhukama?
Tsitsi chidimbu chakakosha chechero / hukama hwese hwauinahwo nevamwe vanhu. Izvi zvinosanganisira hukama hwauinahwo nemhuri yako kana shamwari dzako, asi zvinonyanya kukosha patinenge tichitaura nezvehukama hwepabonde.
Kana iwe uchitsvaga rudo uye iwe ukasarudza kuve newangu-kwenguva refu wekudanana naye, ivo vanogona kunge vari iye munhu waunoshandisa yakawanda yenguva yako yako uine, uye iwe uchave zvakanyanya kupfuura mukana tora sarudzo hombe kutora zvavanoda uye mafungiro avo.
Kana Usiri Kunzwira Tsitsi…
Kana iwe uri, semuenzaniso, mumwe munhu asingawanzo kunzwa kunzwira tsitsi kwakanyanya kune vamwe, uye asinganyanyo kubatwa nekutambura kana kurwadziwa kweavo vakakukomberedza, saka hausi kunyanya kunzwira tsitsi.
Iwe pamwe unoona zvichinetsa kunzwisisa iwo maonero ekuona uye sarudzo zvevamwe vanhu, kunyanya kana vasingaite senge zvine musoro.
Mumaziso ako, munhu anonzwira tsitsi anonyatsonzwa kurwadziwa kwevamwe uye anogumbuka nazvo anogona kuita kunge asina kusimba. Izvi zvinogona kureva kuti haugone kuva neruremekedzo rukuru kwavari.
Mushure mezvose, kana iwe ukaona mumwe munhu achishandiswa zviri nyore, zvinogona kuvhiringidza kuona zvinhu zvichivazungunusa izvo zvaisazove nemhedzisiro kwauri.
Iwe haufarire kuvaona vachipa zvavo zvavanoda kana zvavanoda kuti vabatsire vamwe.
Kana iwe usingakwanise kuremekedza sarudzo dzemumwe munhu, saka zvinogona kunetsa kuchengetedza hukama hwakanaka navo.
Kunyangwe iwe uchizoziva kuti mumwe wako anonzwira tsitsi ane moyo wakanyanyisa - uye iwe ungangovaona sevanhu kwaye - mumaziso ako, pane chokwadi chinhu chakadai sekuve akanaka uye ane rupo.
Zvinogona kutendeuka kubva pakutanga kuve hunhu hwaunoyemura mavari, sezvazvinowanzoitika nehunhu hwatisina isu, kuita chimwe chinhu chaunosvika pakuona zvisina kunaka.
4 Nzira Kusava Netsitsi Kunoparadza Hukama Hwako
Nei Kushaikwa Kwetsitsi Kusingawanikwe MuNarcissist Uye Sociopaths
6 Hukama 'Unofanira Dos' Kune Empaths Uye HSPs
Kudonha Kunze Kwerudo: 5 Inosaina Kunzwa Kwako Kwavari Kwava Kupera
11 Kurwira Empaths Kutarisana Nezve Zuva Nezuva Hwaro
Zvinhu zvina Vanhu Vane Hutano Havasi
Kana Uri Kupararira Nekunzwira Tsitsi…
Kune rimwe divi, kana iwe uri mumwe munhu anonzwira tsitsi uye anoona zviri nyore kuzviisa iwe mune vamwe vanhu, iwe ungangoona zvichikuomera kunzwisisa kuti mumwe wako anogona sei kutonhora uye kuita kunge asinganzwi.
Iwe unogona kunge uchibvunza kuti vane hanya zvakadii newe, sezvo iwe usinga kwanise kunzwisisa kuti vangave sei vekiriniki uye vakavharwa mukutarisana nemamiriro ezvinhu aunonzwa uchishuva nezvawo.
Semunhu anorarama hupenyu hwavo achigara achifunga nezvemanzwiro evamwe vanhu, munhu asiri anonzwira tsitsi anogona, mumaziso ako, anotaridzika zvakanyanya isina kudzika uye kuzvinyudza, izvo zvinogona kureva kuti iwe, zvakare, unogona kutanga kurasikirwa neremekedzo yauinayo kwavari.
Nemativi ese ari maviri achiomerwa nekuremekedza mumwe, vanhu vanonzwa tsitsi zvakasiyana vangangonetseke kuchengetedza hukama hwakasimba.
Kuita Sarudzo Kunogona Kuva Dambudziko
Muhukama hwakakomba, imi vaviri munova timu. Kana paine zvinhu zvakaita sevana uye mogeji dzinobatanidzwa, saka pachave nezvakawanda sarudzo hombe dzauchazofanira kuita pamwe chete pamusoro pemakore.
Kana mumwe wenyu asinganzwiri tsitsi kupfuura mumwe, mungangoomerwa nekuwana chibvumirano maererano nezvimwe zvezvisarudzo zvakakosha zveupenyu.
Ichokwadi kuti zvinogara zvakanaka kuti pave nepakati nepakati mune vaviri. Izvo zvinogona, pamwe, kushanda nemazvo kana mumwe wako ari muroti, uye mumwe wacho aine musoro uye achinyatsoitika, kuitira kuti iwe uve nemusanganiswa wakanaka wekushushikana neicho chinoshanda.
Zvisinei, zvingasave zviri nyore kwazvo kune mumwe munhu anonzwira tsitsi uye mumwe munhu asiri kuyanana, sezvo iwe uchizoona zvakaoma kunzwisisa kufunga kweumwe.
Paunenge uchitevera kusvika pakuziva mumwe munhu uye funga kuti vanogona kunge vari vako, ita shuwa kuti unochengeta kunzwira tsitsi kumberi kwepfungwa dzako.
Icho chiratidzo chinonakidza chekuti vaviri venyu muri mutambo wakaitwa kudenga here, kana kuti hukama hwenyu hungatambura pasi patambo panofanirwa kuitwa sarudzo dzakakosha.
maitiro ekudzora hukama pasina kuupedza
matauriro aungaita mumwe munhu iwe uchiri nemanzwiro kwavari
kushaya mudiwa akashaya
zviratidzo zvekukwezva varume kubasa
iko kunzwa kwaunowana kana uchida mumwe munhu
summerslam 2015 mutengesi vs brock lesnar